porn တစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲစေနိုင်ပါတယ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျန်းမာရေး အမူအကျင့်စွဲ
မကြာမီကသုတေသနကြောင်းပြသထားပါတယ် အပြုအမူနှင့်မယ့်တ္ထုများ အရမ်းစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကကင်းသို့မဟုတ်အရက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းစွဲလမ်းမှုကိုထုတ်လုပ်သောဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်အတူတူပင်ဝိသေသပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေလောင်းကစားဝိုင်း, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်း, နှင့် Facebook တို့ကဲ့သို့လူမှုရေးမီဒီယာနှင့် Tinder သို့မဟုတ် Grindr တူသောဖြစ်ကောင်းချိန်းတွေ့ apps များပါဝင်သည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စက္ကူ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါဟုအဘယ်ကြောင့်ယူဆသင့်ကြောင်းရှင်းပြသည့်ကမ္ဘာ့ ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်းသည်ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနယ်ပယ်မှသုတေသီများစွာမှပူးတွဲရေးသားသည်။ CSBD ရောဂါအသစ်သည်လက်ရှိနေထိုင်သော Impulse Control Disorder အမျိုးအစားအောက်တွင်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်သည်။ စာရေးသူများအနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောရှိပြီးသားအထောက်အပံ့သည် CSB အားစွဲလမ်းစေသောရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။
ဤအကြောင်းကိုသားသမီးတို့အဘို့အတို, zippy ကာတွန်းဖြစ်ပါသည် porn စွဲ။ ဒါကဖြစ်ပါသည် ကြာကြာကာတွန်း ကြောင်းကယ့်ကိုအခြေခံကရှင်းပြသည်။
ထိုအပုံမမှန်အတော်များများဟာအကျိုးသက်ရောက်အတွက်သဘာဝဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အစားအစာ, Bond နှင့်လိင်၏သဘာဝအစစ်ကူတစ်ဦး '' supernormal '' ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်။ ဆား၎င်း၏မြင့်မားနှင့်အတူ junk အစားအစာ, သကြားနဲ့အဆီသူတို့ကဦးနှောက်ရှားပါးမှုများအတွက်ပြောင်းလဲပေးမြင့်မားသောကယ်လိုရီဆုလာဘ်၏ပမာဏအတွက် '' supernormal '' အစားအစာများ ဖြစ်. , လူမှုရေးမီဒီယာ, Bond တစ်ဦးပုံကြီးချဲ့ဗားရှင်းနဲ့တူနေတဲ့ကလစ်မှာ '' မိတ်ဆွေများက '' ရာပေါင်းများစွာရှိ၏ နှင့်ဆန္ဒရှိ '' ပူသူငယ် '' ၎င်း၏ချိုးချီတက်ပွဲနှင့်အတူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းလိင်တစ်ဦး supernormal ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများအတူတူပင် '' hit '' အရမြင့်မားသောက်သုံးသောလိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်နှင့်အတူ, အချိန်ကျော်အသုံးပြုသူများသည်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရဖို့ပိုပြီးအသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြင်းထန်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းဒီများကိုသာလွန်းမင်္ဂလာရှိ၏။
အဆိုပါ dopamine အဆငျ့၏မျှော်လင့်တိုင်းတွင်တက်လေ့အဖြစ်အကျိုးကိုရရှိခဲ့ထားပြီးပြီးနောက် '' ဆုလာဘ်, 'ကအလျင်အမြန်ကိုတဖန်ပယ်ကျရောက်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများလာဆုလာဘ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဝတ္ထုပစ္စည်းမှကိုနှိပ်ခြင်းအားစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးထုတ်လုပ်ဖို့ဦးနှောက်အတင်းအကျပ်စောင့်ရှောက်လျှင်, က system ကိုအလေးပေးပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတိုင်းအတာအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုပိတ်ပစ်။ ကျနော်တို့သို့သော်မူးရူးဆက်လက်လျှင်, ဦးနှောက်ဆုံးဖြတ်ဒီရှင်သန်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရေးပေါ်ဖြစ်နှင့်၎င်း၏ satiation ( 'အလုံအလောက်ခဲ့ကြပါပြီ') ယန္တရားပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလှည့်၌, dopamine ၏မြင့်မားမြစ်ဝကျွန်းပေါ် Fos ခလို့ခေါ်တဲ့ပရိုတိန်းများလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်ဒီကိုအာရုံစိုက်ဤအရေးကြီးသောဆုလာဘ်သတိရနှင့်ပြန်လုပ်ကူညီပေးရန်ဦးနှောက် rewiring ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်တည်ဆောက်။
လေးဝိသေသလက္ခဏာများယခုစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်အဖြစ်ဦးနှောက် function ကိုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဤအရာများသည်:
• Impulse control ယန္တရား - Hypofrontality
'' Desensitisation '' တခြားသူတွေနဲ့အစားအစာသို့မဟုတ် Bond တူသောအထူးသဖြင့်သဘာဝကဆုလာဘ်မှအပျြောအပါးမှတစ်ဦးထုံတုံ့ပြန်မှု, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုသတိထားမိပထမဦးဆုံးစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကပျင်း, စိတ်ဓာတ်ကျပြားချပ်ချပ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါဝင်စားစွာခံစားရသည်။ လျှော့ချ dopamine အချက်ပြများနှင့်အခြားပြောင်းလဲမှုများကိုလျော့နည်းနေ့တိုင်းအပျော်အပါးမှအထိခိုက်မခံနဲ့ dopamine-ပြုစုပျိုးထောင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တ္ထုများအဘို့ '' သည်ဆာမွတ်က 'မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူထားခဲ့ပါ။ သူတို့တစ်တွေဘက်ဇ်ရဖို့ကွီးဆွလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့က, edging masturbating မဟုတ်သည့်အခါစောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုအတွက်ရှာဖွေနေမှတဆင့်အစည်းအဝေးများရှည်ရှည်, အွန်လိုင်းကိုပိုပြီးအချိန်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် desensitisation အသစ်ကအမျိုးအစားမှတင်းမာမှုများ၏ပုံစံ, တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲ, လူစိမ်းပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုသတိရပါ: ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်အသီးအနှံ adrenaline jack ကိုတက် dopamine နဲ့လိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုဆွဲ တင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒ၊ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှု၏အရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကအဲဒါကိုအရမ်းသဘောကျမိလို့ပါ။ Sensitization သည်အစွမ်းထက်သည့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသောပျော်မွေ့နိုင်သည့်သတိကြီးစွာမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ cue-memory link သည်လုပ်ဆောင်မှုတွင်“ အတူတကွမျှဝေခြင်း၊ အတူတကွမီးလောင်ခြင်း” လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်သော ဦး နှောက်ဖြစ်သည်။ ဤသည် Pavlovian မှတ်ဥာဏ်သည်စွဲလမ်းမှု၏ဘဝတွင်အခြားမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုထက်မဆိုစွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်စေသည်။
Rewired အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအကျိုးကို system ကိုစွဲ-related တွေကိုသို့မဟုတ်အတှေးတုံ့ပြန် Buzz မှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုကင်းစွဲသကြားမြင်ကင်းစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ တစ်ခုကအရက်မျက်မှန်၏ clink ကြားသို့မဟုတ်သူတစ်ဦးအရက်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနှင့်ချက်ချင်းသွားလိုလားအဖြစ်ဘီယာအနံ့။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူအဘို့, ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop တက်ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းအိမ်ကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn များအတွက်ပြင်းထန်သောမတရားသောဖြစ်ပေါ်။ သူ၏ဇနီး, မိခင်သို့မဟုတ် flatmate စျေးဝယ်သွားသည့်အခါရုတ်တရက်အများကြီး hornier (မှန်လိင်စိတ်) ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သနည်း မဖြစ်နိုင်။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်းသူ autopilot အပေါ်လျှင်အဖြစ်သူခံစားရ, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးသည်သူ၏ဦးနှောက်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ တချို့က ': porn တစ်ဦးတည်းသာလွတ်မြောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဝင်' 'အဖြစ်ထိခိုက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတစ်ဦးအလုအယက်, လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်ခံစားရပင်တုန်လှုပ်, သူသည်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အပေါင်းတို့သည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးညစ်ညမ်း website မှာပေါ်သို့ logging ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ "ယခုလုပ်!", အော်ဟစ်, အကျိုးကို system ကိုသက်ဝင်ထိခိုက်စွဲလမ်းကြောင်း၏ဥပမာများမှာတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်၏တောင်မှအန္တရာယ်ကသူတို့ကိုရပ်တန့်မည်မဟုတ်။
Hypofrontality ဒါမှမဟုတ် prefrontal ဒေသများတွင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ, အားကြီးသောမသိစိတ်တစ်ပိုင်းမတရားသော၏မျက်နှာကိုအတွက် willpower သို့မဟုတ် Self-ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းနေခြင်း။ ဒါက Pre-တိုကျရိုကျဒေသများအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်အဖြူကိစ္စများ၏ကျုံ့၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာငါတို့ရေရှည်သာယာဝပြောရေးတို့အတွက်ကောင်းသောမဟုတ်ရွေးချယ်မှုအပေါ်ဘရိတ်ထားကူညီပေးသည်သောဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်သွေးဆောင်မှုကိုခံစားရသည့်အခါကျွန်တော်တို့ကိုကိုယျ့ကိုယျကိုမှ '' အဘယ်သူမျှမ '' လို့ပြောကူညီပေးသည်။ ဒီဧရိယာကုန်ခမ်းနှင့်အတူကျနော်တို့အကျိုးဆက်များမြော်တစ်ဦးအားပျော့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါဟာနှင်း-of စစ်များကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ sensitized လမ်းကြောင်း '' ဟုတ်ကဲ့! 'အော်ဟစ် အဆင့်မြင့်ဦးနှောက်အဘယ်သူမျှမ '' ဟုနေစဉ်! မရနောက်တဖန်! ' တစ်ဦးအားပျော့အခြေအနေဦးနှောက်၏အမှုဆောင်-ထိန်းချုပ်မှုဝေမျှနှင့်တကွ, စွဲလမ်းကြောင်းများသောအားဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက်စွဲဖို့နှစ်ထပ်ကွမ်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကပို dopamine အန္တရာယ်များကိုကို (accelerator နင်းအပြည့်အဝစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်) ယူမှသူတို့ကိုကားမောင်းပေမယ်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီမဟုတ်, (ဘရိတ်အုပ်များလွန်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်) မမသာ။
အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ သူတို့အစွမ်းထက်ထိခိုက်လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမတရားသောနှင့် relapse မှပင်အသေးစားစိတ်ဖိစီးမှုခဲစေသည်။
ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်အားလုံးစှဲ၏အဓိကမှာရှိပါတယ်။ porn စှဲလမျးသူပြန်လည်ထူထောင်တစ်ခုမှာသူတို့ကိုတက်ချုပ်ဖော်ပြ: 'ကျေနပ်အားရမှုမရှိတာကိုငါဘယ်တော့မှလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူး'' ။
ထုတ်ယူခြင်း လူအများအပြားကစွဲလမ်းမှုသည်အမြဲတမ်းသည်းခံနိုင်မှု (စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၏တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုစိတ်အားတက်ကြွစေရန်လိုအပ်သည်) နှင့်ရက်စက်စွာရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများအမြဲတမ်းပါ ၀ င်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ တကယ်တော့ဒီစွဲလမ်းမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ - ဒီနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများကနှစ်မျိုးစလုံးကိုသတင်းပို့ကြပါတယ်။ စွဲစွဲလမ်းမှုအကဲဖြတ်ချက်စမ်းသပ်မှုအားလုံးသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည် 'အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်'' ။ အဲဒီစွဲလမ်း၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အထားကိုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသည်းခံစိတ်နှင့်တင်းမာမှုသို့သုတေသနလုပ်ငန်းအပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များလိုလျှင်ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ (ပြင်ပ site ကိုအသစ် window တွင်ဖွင့်လှစ်) ။
<< စွဲ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး >>